မောင်ရှင်းသန့်: အနှစ်သက်ဆုံး ကဗျာများ
ဒီ ကဗျာတွေ အကြောင်းရေးချင်နေတာတော့ ကြာပြီ တက်ခ်မယ့်သူ မရှိသေးလို့ စောင့်နေတာ ။ အခု တော့ ကျွန်တော့် ကိုကြီးမောင်မျိုးက တက်ခ် တော့ ရေးချင်နေတာနဲ့
ကွက်တိ ဖြစ်သွားတယ် ဗျ ။
တက်ခ်တဲ့ သူ ကိုကြီးမျိုး ရွေးထားတဲ့ ဖျက်မြင်း ဆို တဲ့ ကဗျာ လေး က အရမ်းကောင်းနေတော့ ကျွန်တော် ရွေးရမှာ နည်းနည်း လက်တွန့် နေတယ် ။
ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ကဗျာ တွေအများကြီးပဲ (ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် က တော့ ကဗျာ မစပ်တတ်ဘူး ဗျ ကောင်းတဲ့ ကြိုက်တဲ့ ကဗျာ တွေကို တော့ အလွတ်ကျက် ထားတယ် ဗျ) ။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ပထမဆုံး ကြိုက်ဖူး တဲ့ ကဗျာက ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့
၀တ္ထုထဲက ကဗျာတိုလေးပါ ။
ငါ့ မှာ ပင်ပန်း သေခမန်း ကို
မြင်စမ်းစေချင် ချစ်နတ်ရှင် ။ ။
အဲဒီကဗျာ လေးရဲ့ အနက်အဓိပါယ်ကို ကောင်းကောင်းနားမလည်ပေမယ့် နှစ်သက်မိနေတယ် ။ ဒီကဗျာ လေးကို ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ ဇာတ်ကောင် က ထောင်ထဲမှာ အပြစ်မဲ့ စွာ အကျဉ်းကျ နေချိန်မှာ စပ်ဆို ခဲ့တယ်လို့ပါတယ် လေ ။ အဲဒီလို အပြစ်မဲ့စွာ အကျဉ်းစံ နေရသူတွေ ကို သတိရမိတိုင်း ဒီကဗျာလေး က မြင်ယောင်လာတယ် ။ ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး သတိရမိဆုံး ကဗျာလေးပေါ့ ဗျာ ။
နောက်ထပ် နှစ်သက်တဲ့ကဗျာ တွေ က “ ဗြဟ္မစိုရ် နှလုံးသားနှင့် ခရီးသွားသူများ ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ကဗျာ တစ်ချို့ ပါခင်ဗျာ ။
အခု ကဗျာကို ရေးတဲ့ သူ က မြတ်နွယ် ( ပတ္တမြားမြေ ) တဲ့ ။ ကျွန်တော် ညံ့တယ် မညံ့ တယ် ကဗျာ ရေးတာ ကဗျာဆရာ လား ကဗျာဆရာမ လား မသိဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကြိုက်တာ ကဗျာ ပါ ကဗျာ ရေးတဲ့ လူကိုမဟုတ်ပါဘူး ဗျာ ။
သူ့ ရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်မိ တော့ ကျွန်တော့် ရုတ်တရက် အိပ်ယာ က နိုး ရသလိုဖြစ်သွားတယ် ဗျ ။ အကိုတို့ အမ တို့ လဲ ခံစားချက်တော့ ဖြစ်လာမှာပါ ခင်ဗျာ ။
ခံစားကြည့် ကြ ပါ ။
ခုနေများ . . . တကယ်လို့
တစ်ယောက်မှ ရှိလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး ။
၂။ အသေစောလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး
၃။ သေသွားတဲ့ ငါ့မှာလည်း
မယ်မယ်ရရ ဘာမှ မရှိလှပါဘူး။
ငါသေရင် ငိုယိုတမ်းတမယ့် သူတွေကို
လုံးဝ မရှိစေချင်ပါဘူး ။
၅။ သေသွားမှ လာငိုတဲ့အလုပ်
ငါ လုံးဝ မယုံကြည် မယူဆခဲ့ပါဘူး။
ငိုကြွေးတာ ပူဆွေးတာ မရှိခဲ့ပါဘူး ။
၆။ အခုနေများ . . . တကယ်လို့
ငါ ဘာကိုမှ မတောင်းတပါဘူး
“မသေခင်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေကို
အသုဘနိမိတ် အသုဘ သညာတွေ ထင်မြင်မယ်၊
သေခြင်းတရားကို အဖန်ဖန် အောက်မေ့သတိရတဲ့
အသိတရားတွေနဲ့ အသုဘ ကမ္မဌာန်းတွေ
လေးလေးနက်နက် ပွားများဖြစ်ကြမယ်” ဆိုရင်
အချိန်မရွေး ငါသေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ ။
မြတ်နွယ် (ပတ္တမြားမြေ )
ဒီကဗျာ လေး က သတိသံဝေဂ ရနိုင် သလို အတုယူလို့လဲ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ကဗျာရေးသူရဲ့ နှလုံးသား ကိုလဲ ခန့်မှန်း နိုင်ပါတယ် ။
နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြိုက် တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါသေးတယ် ။ အခု စာအုပ်ထဲက ပါပဲ။ ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေ ရဲ့ ကဗျာလေး ပါ ။ ဒါပေမဲ့ ပို့စ်အရမ်းရှည် နေလို့ မဖေါ်ပြနိုင်တော့တာ အနူးအညွှတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
နောက်ကြုံဆုံ တဲ့ အခါရှိ ရင် ဖေါ်ပြပေးပါအုံးမယ် ခင်ဗျာ ။
Posted by မောင်ရှင်းသန့် at Saturday, December 13, 2008
ညီလေးရှင်းသန့် အလည်လာသွားတယ်ကွာညီလေးရေ.......... ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးကောင်းတယ်နော်.......
တစ်ယောက်မှ ရှိလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး ။ ကောင်းတယ်ညီလေး ရေးထားတာလေးတွေနော်............ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေညီ
ညီလေးရေ့ ရေးပေးတာ ကျေးဇူးဗျ ငါ့ညီလေးက စာအုပ်တွေဖတ်ဖူးတော့ စာပေရသတွေ ပြည့်နေတယ်ထင်တယ် စာရေးပြေပြစ်နေတယ် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို ကြိုက်တယ် ဇတ်ကောင်နေရာဝင်ခံစားကြည့်တော့ စိတ်မကောင်းစရာ ....
ကြောက်လာပြီးကွာ မေ့ထားပါတယ်ဆို :)
ငါသေခဲ့မယ် ဆိုရင်.... ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကောင်းတယ်နော်.. သံဝေဂ ရစရာလေး.. မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူး..မောင်လေး ရေ...
အစ်ကိုတော်ပြောသွားသလိုပဲ စာအရေးအသားလည်း ပြေပြစ်တယ်။ :)
မောင်လေး ကြိုက်တဲ့ ကဗျာလေးနှစ်ပုဒ်လုံး ကောင်းတယ်.. ငါသေခဲ့မယ်ဆိုရင်.. ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးက သေခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ.. လူတိုင်းအတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ အဝေးကြီး၊ နောက်ဘ၀ဆိုတာ နီးနီးလေးပဲနော်.. ကိုစောဝေရဲ့ ကဗျာကိုလဲ အဆင်ပြေတဲ့အချိန် တင်ပေးပါဦး.. ။